नेपाल घुम्नआएका पर्यटकहरुको बड्दो अस्लीलता, कस्ले रोक्ने ? –
नेपाल घुम्नआएका पर्यटकहरुको बड्दो अस्लीलता, कस्ले रोक्ने ?
पोखरा – नेपालमा पर्यटक ओइरिने एउटै कारण छ, त्यो हो यहाँको प्राकृतिक सम्पदा। कंक्रिट संरचनाबाट आहत भएका विदेशी पर्यटकका आँखा प्राकृतिक स्वच्छन्द सम्पदामा रमाउन पाउँदा साँच्चिकै राहत महशुस गर्छन्। त्यस्ता सम्पदाहरु नेपाली जनसमुदायका धार्मिक पुज्य स्थल पनि हुन्। जुन वर्षौदेखि पुजिँदै संरक्षण भइरहेका छन्।
अन्नपूर्ण सर्किट हुँदै थोरङ भञ्ज्याङ पुगेकी उनका गतिविधि सञ्जालमा हेर्दा पनि विभिन्न प्राकृतिक सम्पदामा अर्धनग्न तस्बिर खिचाइरहेको देखिन्छ। तर फेवातालमा अधिक मानवीय चहलपहल हुने ठाउँमा समेत दिउँसोकै समयमा नग्न तस्बिर खिचाउनुले निगरानी गर्ने निकायले त्यस्ता गतिविधि निषेध गर्न चासो नदेखाएको हो की भन्ने प्रश्न उठेको छ। केहि समय अगाडी नेपाल घुम्नआएका पुरुष पर्यटकले तिलिचो तालको किनारामा नग्न तस्वीर खिचाएको विषयले पनी निक्कै चर्चा पाएको थियो ।
नेपाल आएका पर्यटकहरुले यसप्रकारका हर्कत गरि रहदा पनी सम्बन्धीत निकाय मौन बस्दैआएको देखिन्छ भने हालसालै एक हिमालमा कुवेतको विशाल राष्ट्रिय झण्डा फहराउदा पनी नेपाल सरकारको आधिकारीक धारण अझै आएको छैन ।
नेपालले पर्यटन वर्ष २०२० मनाईरहदा कुन ठाउमा कस्तो गतिविधि गर्ने वा कतीसम्म छुटदिने भन्ने नेपाल सरकारले समयमै प्रष्ट पारीनु जरुरी देखिन्छ ।
« कञ्चनपुर मोटरसाइकल दुर्घटना,२जनाको मृत्यु
प्रधानमन्त्रीलाई भेटे सचिन तेन्दुल्करले »
उपभोक्तामा कोरोना भाईरसको… (1)
प्रधानमन्त्रीले थपे केन्द्रीय… (1)